Ngezinye izikhathi, izinqubo eziningi emzimbeni, okuyinto avele ngaphandle nibonakala ukuba engahlobene, eqinisweni, ahlobene kakhulu kakhulu. Futhi ngokuvumelana, "normal", lo zokugula kungenzeka nge isifo esisodwa zingavela akanjalo, futhi iziguli isimanga kakhulu. Kunjalo-ke nangobufakazi Reiter Syndrome.
Lokhu uphawu kuhlanganisa izimpawu ezintathu ngokuphelele disparate: umonakalo ngomgudu womchamo, samathambo, iso ububomvu. Odokotela futhi akubize ngokuthi spondyloarthropathy seronegative. Seronegative - lokhu kusho yokuthi lapho isici samathambo (omzimba athile) ayikwazi ukutholwa egazini. Kulokhu, lesi sifo livezwa izinqubo ukuvuvukala nomaphi imisipha babiza amathambo. Kuyacaca ukuthi kuleli cala, "iyahlaselwa" zonke amalunga omzimba. Lokhu ukuvuvukala kuhambisana ukuvuvukala, ububomvu nobuhlungu (ngisho ezinye zezimpawu, njenganoma iyiphi enye isifo).
Reiter Syndrome ibizwa ngokuthi isifo sokuqaqamba kwamalunga esisheshayo, okusho ukuthi kwenzeka njengoba endleleni umzimba osabela ngayo ukuze Ukungena kwamagciwane ezithile. Futhi ukuvuvukala akuqali emalungeni. Iningi leziguli ezine-sitholakele "Reiter Syndrome", bane ngokuhlangana ngokocansi. ifomu kwabo lesi sifo okuthiwa urogenital. Ungase futhi onakaliswe kokungenisa kwamagciwane emlonyeni ukudla noma lapho thina nje ayinawo babegeza izandla baze kahle. Khona-ke ngendlela nesifo esibizwa ngokuthi emathunjini.
Reiter Syndrome useqala ukukhombisa ezinsukwini 7-21 emva owayegula izinkontileka. Uma igciwane lalivela ucansi, iphutha kungenzeka chlamydia trachomatis. Uma ifomu emathunjini, kungenzeka Salmonella, Shigella, noma Yersinia. Ukutheleleka nge ukudla kungenxa izimo ongaphilile wesitoreji futhi ngimpofu handling inyama. Yiqiniso, akubona bonke abagulayo, ababhekene nezimo agent. Ososayensi basikisela ukuthi icala isakhi esithile. 80% eziguli babe isakhi sofuzo okungavamile, kodwa kusuka neboleyuschih -% 6 kuphela. Mhlawumbe, futhi, avame ukuba, kodwa ngesikhathi yocwaningo akudingeki izimpawu zesifo, "Reiter Syndrome".
Indlela bahlonze izifo? Kukhona izimpawu ezenzeka iziguli eziningi, kodwa kukhona ezinye ezingaba kuphela ukutholwa kwezinye.
izimpawu syndrome Reiter imi kanje:
Ukulimala ngomgudu womchamo. Izimpawu ze-wendlala yabesilisa, umthondo kanye urethra ezingabantu. I fallopian amashubhu, kwesibeletho, esithweni sangasese kwabesifazane. Abesilisa ungase uzizwe ukuncinza ngesikhathi ukuchama, kumele baye yokugezela kaningi, kungenzeka yisikhathi ubomvu kusukela umthondo. Ngokuvamile, noma kunjalo, lezi zimpawu omele wobulili namandla kufanele ugijime kudokotela, kungenjalo futhi isipatsholo kungenziwa kweqiwe. Ngo abesifazane, izimpawu ezifanayo, futhi, abe umuzwa esivuthayo, kodwa kukhona ukuvuvukala ezithweni zangasese. Nabo futhi, kufanele ngokushesha kudokotela, ngoba icala ayikwazi ukuba Reiter Syndrome.
Ukwephulwa ngu emalungeni. Ngokuvamile obukhulu futhi ivuvukele namaqakala, amadolo kanye ematheni. Futhi unesifo emgogodleni kungaba diskmofrtno ithuba. Ngezinye izikhathi ubuhlungu futhi esikhundleni ukhalo nomgogodla amalunga omzimba. Futhi labo abangekho ngibusiseke abe "ezakhi zofuzo okubi", okuyinto thina kushiwo ngenhla, abangewona okuningi kungenzeka athole "ezilwaneni ezinomgogodla ezinamehlo" izimpawu.
Ukuvuvukala iso kwenzeka e-50% ifomu urogenital, futhi 75% - ne emathunjini. Amehlo acasuke futhi obomvu, ngezinye izikhathi iziguli esekhala angaboni kahle. Nakuba Yiqiniso, ngokumelene isizinda izinkinga emgogodleni kuyinto ayibi mibi kangako.
Okunye simpotomy. Izilonda emlonyeni ezithweni zangasese akhiwa, kodwa - a rarity. Mayelana 10% futhi zenzeka nezinkinga inhliziyo - okungukuthi, igazi elikuyi-aorta ageleza emuva ku-i-ventricle, ezehlisa "futha" Umsebenzi wethu.
Kuthiwani uma wena noma othandekayo Reiter Syndrome? Ukwelashwa ezihambisana ngemithi elwa namagciwane ukuthatha, corticosteroids futhi okungezona steroidal anti-inflammatory. Aqokwe Physiotherapy. Ngokuvamile, isifo ziphathwe odokotela abaningana. Futhi mhlawumbe impumuzo eside esimweni. Nakuba ukunakekela yena esasiyoba nawo.
Ububomvu emlenzeni: izizathu lapho udokotela ucele
Emadolobheni amakhulu ase-Tajikistan: incazelo emfushane
Ukwelashwa Unconventional: i-hydrogen peroxide ngu Neumyvakin. Ukwelashwa nge-hydrogen peroxide: Izibuyekezo
Kusukela sizogqokani oluluhlaza ibhulukwe: yemfashini imibono ezithakazelisayo kanye nezincomo